तातोपानी नाका असोज १९ देखि खुल्ने - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Breaking News तातोपानी नाका असोज १९ देखि खुल्ने
सिन्धुपाल्चोक । पहिरोका कारण सडक सम्पर्क टुटेको तातोपानी नाका यही असोज १९ गतेदेखि खुल्ने भएको छ । नेपाल र चीनका अधिकारीबीच आज मितेरी पुलमा बसेको बैठकमा नाका असोज १९ गतेदेखि खोल्ने सहमति भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए ।
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रुपमा बढेसँगै र तातोपानी नाकासम्म पुग्ने सडकमा पहिरो गई सडक भत्किएपछि तातोपानीबाट हुने कारोबार ठप्प भएको थियो । नाका खुलाउने विषयमा छलफल गर्नका लागि चीनका तर्फबाट ल्हासाका उच्च अधिकारीहरु आएको तातोपानी भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । नेपालका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालसहित भन्सार प्रमुख एवं नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धानका प्रमुखहरु छलफलमा सहभागी थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)
छलफलका क्रममा नेपालले चीनतर्फको कुती नजिकैको ताल फुट्न सक्ने भन्दै साइरन राख्न अनुरोध गरेको छ भने चिनियाँ पक्षले यसबारे माथि कुरा गरेर निर्णय गर्ने बताएको पनि प्रमुख खत्रीले जानकारी दिनुभयो । तिब्ब्तको कुती नजिकैका ताल फुट्ने अवस्थामा रहेको र बाढीपहिरोले सडक अबरुद्ध भएको भन्दै एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि तातोपानीबाट व्यापार सञ्चालन भएको छैन । चिनिँया राजदूतावासले गत साता रसुवा र तातोपानी नाका खुलाउने निर्णय गरेको थियो । रासस
दीपशंकर चौलागाई - October 23, 2020
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - October 19, 2020
एकजना शिक्षकमा कोरोना संक्रमण देखिँदा ३५ विद्यालयमा बिदा
Breaking News रबिन कटेल - October 18, 2020
धनकुटा । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका एक शिक्षकमा कोरोना संक्रमण देखिँदा गाउँपालिकाले सो क्षेत्रका ३५ विद्यालयलाई १३ दिन विदा दिएको छ । छथर जोरपाटी–१...
नेइमारसहित पाँच खेलाडीलाई रातो कार्ड
एजेन्सी - September 14, 2020
पेरिस । फ्रेन्च लिग वानअन्तर्गत पिएसजी र मार्सेलीबीच आइतबार राति भएको फुटबल खेलमा खेलाडीहरु खेल मैदानमै भिडन्त भयो । खेलाडीहरु नै एकापसमा भिड्दा खेल...
सर्लाहीमा ३२ जना कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या ८ सय १० पुग्यो
राकेश गुप्ता - August 8, 2020
सर्लाही । सर्लाहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ८ सय भन्दा बढि पुगेको छ । आज(शनिवार) एकै दिन ३२ जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरु थपिएको सर्लाहीका प्रमुख...
बालिका बलात्कारको अभियोगमा दाङमा ३ जना पक्राउ
प्रदेश ५ ओपेन्द्र बस्नेत - June 19, 2020
दाङ । दाङमा १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा ३ जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाले पक्राउ गरेको छ । दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर...
Exclusive राजधानी समाचारदाता - March 18, 2020
भक्तपुर । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले भोलि चैत...
पनौतीमा गोली चल्यो, तीन प्रहरी घाईते
Breaking News सुरज श्रेष्ठ - March 16, 2020
काभेपलाञ्चोक । काभेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौतीमा टिपरले ठक्कर दिएर मृत्यु भएको विषयलाई लिएर पनौती, बसपार्क क्षेत्र तनावग्रस्त भएको छ । प्रहरीले स्थानीयहरुको भिडलाई नियन्त्रणमा...
उर्मिलाकाे गीतमा पूजाकाे अभिनय
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - September 12, 2020
काठमाडाैं । गायिका उर्मिला लाम्गादेले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले ‘लिन आउँछु भन्थ्यौ’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेकी हुन्। सार्वजनिक गीतको भिडियोमा अभिनेत्री पूजा शर्मा...
वीरको क्यान्टीनमा बेसहारालाई नि:शुल्क खाना, ‘भोकै नबस्नुस हामी छौं’
समाज राजधानी समाचारदाता - April 1, 2020
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको सन्त्रासले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको र मुलुकका नीजि अस्पतालले संकास्पद बिरामी उपचार गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका बेला...
Breaking News पूर्णभक्त दुवाल - May 27, 2020
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १६.६ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ डलर पुगेको छ ।...
झिमरुक । प्युठानमा बस दुर्घटनामा चालकको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको माण्डवी गाउँपालिका–१ तिरामदेखि दाङको घोराहीको लागि छुटेको ना ४ ख ५५६१ नम्बरको बस...
सुजीतकुमार झा - October 22, 2020
ईश्वर तामाङ - October 18, 2020
यो पनि पढ्नुहोस छोरीलाई गोली हान्ने बुबा कारागार चलान